I-China Elbow inkxaso yefektri kunye nabaxhasi | qiangjing
Iipads ze-Elbow, njengesixhobo semidlalo yobuchwephesha, sibhekisa kuhlobo lweegiya zokukhusela ezisetyenziswa ukukhusela iijoyini ze-elbow. Ngokuphuhliswa koluntu, iipads ze-elbow ziye zaba sisinye sezixhobo ezifanelekileyo zemidlalo yeembaleki.
Umsebenzi: Khusela umqolo, ubonelele ngoxinzelelo olulungileyo
Iipads ze-Elbow, njengesixhobo semidlalo yobuchwephesha, sibhekisa kuhlobo lweegiya zokukhusela ezisetyenziswa ukukhusela iijoyini ze-elbow. Ngokuphuhliswa koluntu, iipads ze-elbow ziye zaba sisinye sezixhobo ezifanelekileyo zemidlalo yeembaleki. Isiseko sesinye sezona ndawo zinzima zomzimba wabantu. Ithuba lokulimala kweenqanawa zembaleki liphantsi kakhulu, kodwa iimbaleki zemidlalo zihlala zinxiba iipads ze-elbow ukuthintela ukonakala kwemisipha.
Indima yokuqala yeepads ze-elbow kukubonelela ngoxinzelelo kunye nokunciphisa ukudumba; Okwesibini kukunciphisa izinto kunye nokuvumela amalungu enzakeleyo ukuba ahlaziye. Kwangelo xesha, kungcono ukuba ungaphazamisi ukusebenza kwesandla okuqhelekileyo, ngoko ke ukuba akukho mfuneko, uninzi lweebhloko ze-elbow azichaphazanyiswa yi-elbow. Iipads ze-Elbow kunye neebhedi zamadolo zenzelwe ukukhusela i-elbows kunye namadolo ukuba angalimala kwaye unxibe i-cushions ezithambileyo okanye iigobolondo ezinzima. Ukuze kuncitshiswe ubunzima besixhobo, abaqulunqi bokwenza iipads ze-elbow kunye neebhedi zamadolo ukuba zibe lula, zihle ngakumbi, zilungele kwaye zisebenze.
Abahlobo abathanda ukudlala i-tennis, badminton, tafile tennis, emva kokudlala ibhola, ngakumbi xa bedlala i-backhand, i-elbow iyonzakala, nokuba ukunxiba iipads ze-elbow, iingcali zisixelela le nto yaziwa njenge "tennis elbow. Kwaye le tennis umphambili ikakhulu ngelixesha lokubetha ibhola, isihlanganisi-esinqeni asitshixwanga, isihlwitha asitshixiwe, kwaye umsipha wesongezo somphambili woluliwe ngokugqithileyo, sibangela ukonakala kwendawo yokuncamathisela .Kusekho uguquko olugqithisileyo xa kubetha Ibhola, ukuze wonyuke umdibaniso we-elbow.Ngoko xa udlala i-tennis, ukuba uziva iintlungu ze-elbow, kungcono ukunxiba iibrawuza ezinqeni ngelixa unxibe iipads ze-elbow .. Kwaye xa ukhetha iipads ze-elbow, kufuneka ukhethe enye Ukuba ukulandelelana akulunganga kakhulu, akuyi kukukhusela.Ukungayinxibi kakhulu okanye ukukhululeka kakhulu, kakhulu kuya kuchaphazela ukuhamba kwegazi, kukhululeke kakhulu kwaye kungazukukhusela.
Iimpawu zenkxaso ye-elbow:
Ukunyanga ubushushu: Unyango olushushu nolunomswakama lujoliso lwabaqeqeshi kunye noogqirha bokubuyisela kwimeko yesiqhelo ukunyanga amalunga kunye nemisipha eyonzakeleyo. Iipads ze-elbow zenziwe ngendwangu ephezulu ye-elastic, enokubambelela ngokuthe ngqo kwindawo yokusetyenziswa ukukhusela ukulahleka kobushushu bomzimba, ukunciphisa intlungu kwindawo echaphazelekayo, kunye nokukhawulezisa ukuphinda kubuye kwakhona.
2 Ukunyusa ukujikeleza kwegazi: Ubushushu bonyango obugcinwa ziipads ze-elbow bukhuthaza ukujikeleza kwegazi kwezicubu zomzimba kwindawo yokusetyenziswa. Esi siphumo siluncedo kakhulu kunyango lwamathambo kunye nentlungu edibeneyo. Ukongeza, ukuhamba kwegazi olulungileyo kunokuwudlala ngcono umsebenzi we-motor yezihlunu kunye nokunciphisa ukubakho kokulimala.
I-3 Inkxaso kunye nefuthe lokuzinza: iipads ze-elbow zinokuqinisa ukudibanisa kunye ne-ligaments ukumelana nefuthe lamandla angaphandle. Khusela ngokufanelekileyo amalungu kunye ne-ligaments.
Izixhobo ezi-4 ezingasasebenziyo
Inqaku leNkxaso ye-Elbow
Jonga kwinkundla yebhasikithi ukufumana into eluncedo kubomi bemihla ngemihla
Kwi-NBA yenkulungwane edluleyo, iipads ze-elbow ziye zaba yenye yezona gear zithandwa kakhulu zeenkwenkwezi ezininzi. Ithuba lokuzisa iipads ze-elbow yiJordani. Iipads ze-Elbow azinayo kuphela ifuthe lokucinezelela, kodwa zidlala nendima ethile - isiphumo sokunqanda inzuzo. I-swingman ezininzi ezidumileyo emva kweJordani, ezinje ngePenny Hardaway kunye neGrant Hill nazo zazinxibe iipads ze-elbow.
Kutheni le nto iipads zewashi zithandwa kangaka? Alithandabuzeki elokuba iJordani yayiyileya yonyaka! Kwinkulungwane yama-21, iJordani isanxibe i-elace brace kwaye yona kuphela iyinxiba ngakwesobunxele. Oku kube yinkcubeko eyahlukileyo kwindoda endala, hayi kuphela intsimi ye-NBA. Ebephethe iidyokhwe ezingalweni, ezakuba zezona zixhobo zokhuselo zivele enkundleni ngeloxesha. Sifundile ukuba abadlali banxiba iipleyiti zewashi, kanye njengoko belandela iJordani. Ixesha lafika ngo-2003. Inkundla, asisakwazi ukumbona uthixo webhasikidi. Okwangoku, kubonakala ngathi iipads ze-elbow nazo zithathe umhlala phantsi kunye neJordani, kodwa zaqala ukunxiba imikhono yengalo (ngakumbi). U-Kobe, AI, uPierce, uCterter nabanye abadlali baphinde babeka imikhono yengalo. Baze nayo i-wave yamikhono yengalo kwiligi kwakhona. Nangona umkhono wengalo uhlukile kwi-elbow pad, isesandleni ngokubonakala. Kule mihla, iipads ze-elbow kunqabile ukuba zibonwe kwiinkundla ze-NBA, imikhono yengalo ibe yenye yezona zixhobo ziqhelekileyo zokuzikhusela.
Ngapha koko, zininzi izinto ezisetyenziswayo ukunxiba imikhono yengalo kwezemidlalo, kungekuphela nje kuba zikhangeleka zipholile.
1. Isingalo sangalo singakhusela ingalo ngendlela ejikeleze konke, ukuphucula ukuqina kwengalo, kunye nokwenza iingalo zezihlunu zolutsha kungabikho lula ukwenzakala phantsi kovavanyo olunobundlongondlongo.
2. umkhono wengalo unokugcina ukuqina kwemisipha yengalo. Ukunxiba ingalo yokugada kuya kudala imbonakalo yoxinzelelo kumphezulu wolusu lomntu, kuthintele ukunyikima kwemisipha, kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kumphezulu wolusu. Oku kuqiniswa kuya kuxhasa amandla emisipha kunye nokuphucula ukusebenza kweembaleki.
3. Ingalo engalo ingagcina ubushushu bengalo. Ukulondolozwa kobushushu kunokuqinisekisa ukuba amandla engalo akaphulukani lula. Umgcini wengalo unokugcina ukufudumala xa uphuma ebusika.
4. Nxiba imikhono yengalo ukunqanda ukukrala kwesikhumba, ukukhuhla, nokuhlaba. Ukuba yingalo yokugada ngakwicala lokulwa nokungqubana, kungathintela nokuwa.
5. Ingalo yengubo inomsebenzi wokukhusela ilanga. Imidlalo yangaphandle ephantsi kwelanga kakhulu ehlobo inokunciphisa ngokufanelekileyo ulwalamano lomonakalo wesikhumba kwimisebe ye-Ultraviolet.
Edlulileyo: Inkxaso yesileya
Okulandelayo: Iigloves zemidlalo